यो साता बजारमा आए यस्ता गीत | Ratopati
काठमाडौँ– नेपाली सङ्गीत बजारमा यो साता पनि करिब दुई दर्जन नयाँ गीत भित्रिए । यसरी भित्रिएका गीत सङ्गीतमा लोकगीतदेखि आधुनिकगीतसम्म रहेका छन् । ती यस्ता छन् ।
‘अर्को जन्म होला नहोला’
काठमाडौँ– मोडल अमित शाह र मनिता खुलालको आकर्षक अभिनय रहेको भिडियो ‘अर्को जन्म होला नहोला’ सार्वजनिक भएको छ । गायिका जुनु गौतमको स्वर रहेको यो गीतमा गोविन्द हुमागाईंको शब्द, कर्मा ग्याल्चेन बम्जनको सङ्गीत तथा फणिन्द्र राईको सङ्गीत संयोजन छ ।
नवराज घिमिरेको छायाङ्कन रहेको भिडियो प्रवीण थापाले निर्देशन गरेका हुन् । गीत आफ्नो जीवनसँग मेल खाएकाले भिडियोमा पनि अभिनय गरेको मोडल अमित शाहले बताए ।
‘१४ अञ्चल ससुराल’
काठमाडौँ– अभिनेत्री सारा श्रीपाली र पल शाहको अभिनय रहेको ‘१४ अञ्चल ससुराल’ सार्वजनिक भएको छ । गायक खुमन अधिकारीको स्वर रहेको गीतको भिडियो पनि बनेको छ । गीतमा शब्द तथा सङ्गीत माधव न्यौपानेको छ ।
चलन चल्तीका गीतभन्दा केही लामो लाग्ने गीतमा पल र सारासँगै अराज केशवले पनि नृत्य गरेका छन् । विक्रम चौहानको निर्देशनमा बनेको भिडियोमा विदेशी युवती पनि देखिएकी छन् ।
‘जवानीमा पहिलो पाइला...’
काठमाडौँ– डा. डीआर उपाध्यायको नयाँ गीत ‘प्रेममा पहिलो पाइला...’ सार्वजनिक भएको छ । शशी रावलको स्वर, सागर अधिकारी ‘शरद’को सङ्गीत रहेको गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको हो ।
डीआरको ‘सहेली’ एल्बममा रहेको यो गीतको भिडियोलाई सुवास प्रधानले निर्देशन गरेका हुन् । प्रेम लामाको छायाङ्कन, टेकेन्द्र शाहको सम्पादन रहेको गीतको भिडियोमा मनिषा सापकोटा र प्रकाश विकलाई फिचर्ड गरिएको छ ।
डीआर म्युजिक एन्ड ट्रेडिङबाट सार्वजनिक गरिएको गीत जति राम्रो छ गीतको भिडियो पनि त्यतिकै राम्रो बनेको छ ।
साहित्यकार तथा गीतकार डा. डीआर उपाध्यायले केही समयअघि नेपाली एल्बम प्रकाशनमा एकै पटक सबैभन्दा धेरै एल्बम निकालेर नयाँ रेकर्ड राखेका थिए । राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेको हातबाट एकै पटक सात एल्बम विमोचन गरिएको थियो । यो विषयलाई सम्बोधन गर्दै उनलाई ‘एभरेस्ट वल्र्ड रेकर्ड’को प्रमाणपत्र पनि प्रदान गरिएको छ ।
‘कान्छी हे कान्छी’
काठमाडौँ– बेली डान्सरको रूपमा परिचित मोडल बिनु शाक्य र मोडल कमल सिंहको अभिनयमा ‘कान्छी हे कान्छी’ बोलको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । रायन डङ्गोलको स्वरमा रहेको गीतमा कृष्ण भक्त महर्जनको शब्द सङ्गीत छ ।
सुरेन्द्र बसेलको कोरियोग्राफी रहेको भिडियोमा बिनु एक गाउँले युवतीको भूमिकामा छिन् । सोनम पाख्रिनको निर्देशनमा भिडियो तयार भएको हो ।
काठमाडौँ– गायिका प्रमिला तामाङ र ‘लैबरी सिङ्गिङ स्टार’ सिरज २ का विजेता सुरज लोहनीको स्वरमा रहेको ‘आँखा झिमिक्कै’ बोलको गीत युट्युबमा सार्वजनिक भएको छ । गीतमा दीपक रमणको शब्द तथा सङ्गीत छ ।
सनसाइन प्रोडक्सन प्रालिले निर्माण गरेको भिडियोमा सुशान्त श्रेष्ठ, निमा शेर्पा, सविता खड्गी र सानु शेर्पा फिचर्ड छन् । गायिका प्रमिला र गायक सुरजलाई पनि भिडियोमा देख्न सकिन्छ ।
नारायण लामाको निर्देशन रहेको गीतको भिडियोमा सुमन तामाङको कोरियोग्राफी छ । कोरियोग्राफर तामाङले नै भिडियोको सम्पादन पनि गरेका हुन् ।
काठमाडौँ– उमा खड्काले पहिलो लोकदोहोरी गीत ‘तकदिर’ भिडियोसहित ल्याएकी छन् । गीतमा विष्णु परियार र अर्जुन पन्तसँग उनले गायनमा सहकार्य गरेकी छन् ।
निशान एसके र पुजना घिमिरेको अभिनय रहेको गतिको भिडियोमा सुशील डाँगीको छायाङ्कन, प्रकाश एसकेको सम्पादन र निशान एस केको निर्देशन रहेको छ ।
काठमाडौँ– मानव कालुङ मगरको प्रस्तुतिमा ‘बटौलीको बजार’ बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । गीतमा गायिका मानव कालुङ र गायिका देवी घर्ती मगरको स्वर रहेको छ ।
गम बयम्बु मगरको शब्द तथा लय सिर्जना रहेको गीतको भिडियोमा सरिष्मा मगर र मानव कालुङ मगरको अभिनय छ ।
निरज शाहीको कोरियोग्राफी, मुकेश हुमागाईंको छायाङ्कन, राजेश कुमारको सम्पादन, बबिता श्रेष्ठको निर्देशन रहेको भिडियो आकर्षक बनेको छ ।
काठमाडौँ– मेलिना राई र विक्रान्त मेहताको स्वरमा रहेको नयाँ गीत सार्वजनिक भएको छ । शुक्रबार मेलिना राईको अफिसियल च्यानलबाट ‘नक्कले मोरा’ बोलको गीत सार्वजनिक गरिएको हो । सार्वजनिक उक्त गीतमा दीपक शर्माको शब्द तथा सङ्गीत रहेको छ ।
शान थापाको निर्देशनमा तयार भएको भिडियोमा गायक मेहता र एलिसा राई फिचरिङ छन् । राजीव समरको करियोग्राफी रहेको भिडियोमा बुद्ध थापाले क्यामेरा चलाएका छन् ।
काठमाडौँ– गायक सुनिल लामाको हिमाली फेदैको गाउँमा बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । काठमाडौँमा एक कार्यक्रमबीच उक्त गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको हो ।
गायक सुनिल लामाकै सङ्गीत रहेको उक्त गीतका रचनाकार भने समिर लामा हुनुहुन्छ । वरिष्ठ सङ्गीतकार शिलाबहादुरको एरेन्ज रहेको गीतमा सुनिता लुङ्बा र योसफको अभिनय देख्न सकिन्छ ।
गीतको भिडियोको कोरियोग्राफी, सम्पादन र निर्देशन अजय स्याङ्तानको रहेको छ भने थोकर फिल्मस् प्रालिको पोस्ट प्रडक्सनमा उक्त गीत बजारमा आएको छ । सार्वजनिक भएको गीतको भिडियोमा काभ्रेको नमोबुद्धका मनोरम दृश्यावलोकन गर्न सकन्छि भने गीत सङ्स नेपालको युटुब च्यानलमार्फत सार्वजनिक भएको छ गायक लामा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा कोरियामा रहँदै आउनुभएको छ ।
काठमाडौँ– मोडल विकास लामिछाने र नायिका मरिस्का पोखरेलले अभिनय गरेको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । ‘घात’ बोलको मर्मस्पर्सी गीतमा मेदी हसन न्यायदीको आवाज रहेको छ ।
समिर राईको शब्द र नागेन्द्र श्रेष्ठको सङ्गीत रहेको गीतको भिडियो शिशिर श्रेष्ठको निर्देशन गरेका हुन् । काठमाडौँ आसपासमा खिचिएको भिडियोमा विछोडको पीडा देखाइएको छ ।
‘सलल बग्ने गण्डकी नदी’
काठमाडौँ– गायक निश्चल गुरुङ र गायिका भीमा गुरुङको आवाज रहेको गीत ‘सलल बग्ने गण्डकी नदी’ बजारमा आएको छ । राजु तोलाङ्गी गुरुङको शब्द तथा लय रहेको गीत सालैजो भाकामा तयार गरिएको छ ।
विकास तामाङको छायाङ्कन, निरोत्तम पाण्डेको सम्पादन, सुजन सुर्खेती गोरखालीको निर्देशनरहेको भिडियोमा सुजन र रिनुको अभिनय रहेको छ ।
काठमाडौँ– गायक प्रमोद खरेलको गीत ‘गल्ती भो’को भिडियोमा अभिनेत्री केकी अधिकारी देखिएकी छन् । देवेन्द्र क्षेत्रीको शब्द रहेको गीतमा अर्जुन पोखरेलले सङ्गीत भरेका हुन् ।
सुन्दर नगरी पोखरामा छायाङ्कन गरिएको गीतको म्युजिक भिडियो फलानो क्रिएसनले बनाएको हो । भिडियोमा केकी अधिकारीलाई देवेन्द्र क्षेत्रीले साथ दिएका छन् । सरोज अधिकारीको छायाङ्कन, सुवास अम्गाईंको सम्पादनमा रहेको भिडियो अपिल त्रिपाठीले निर्देशन गरेका हुन् ।
काठमाडौँ– नृत्य निर्देशक दीप गुरुङको प्रस्तुतिमा ‘सिरानचोके चेली’ वोलको मौलिकगीत सार्वजनिक भएको छ । मौलिक गीत ‘सिरानचोके चेली’मा कौडा किङ सर्जक तथा गायक गणेश गुरुङ र गायिका दुर्गा परियारको सुमधुर स्वर रहेको छ ।
गीतको शब्द पनि गायक गणेश गुरुङ र निर्देशक दीप गुरुङको रहेको छ । जसलाई पवन वाङले सङ्गीत संयोजन गरेका छन् ।
गीतको म्युजिक भिडियो दीप गुरुङको निर्देशन र आशुतोष ऐडीको सह–निर्देशनमा निर्माण भएको छ । जसमा मनोज थापा मगर, लक्ष्मी गुरुङ, पार्वती गुरुङ, बबिता गुरुङ, सुमित्रा गुरुङ, उवा मगर र पश्चिमाञ्चल सांस्कृतिक ग्रुपको दमदार नृत्य तथा अभिनय रहेको छ ।
काठमाडौँ– अभिनेत्री तथा कार्यक्रम सञ्चालिका रिमा विश्वकर्मा अभिनित नयाँ म्युजिक भिडियो ‘मायालु’ सार्वजनिक भएको छ । जहाँ भिडियोमा उनलाई मोडल जीवन भट्टराईले साथ दिएका छन् ।
परदेशीको कथा बोल्ने म्युजिक भिडियोलाई प्रकाश धितालले निर्देशन गरेका हुन् । आरसी थापाको शब्द तथा सङ्गीत रहेको गीतमा लोकप्रिय गायक स्वरूप राज आचार्यले स्वर भरेका छन्
भ्वाइस अफ नेपाल सिजन टुबाट थाहै नदिई निकालिएकोमा अभयाको आक्रोश (भिडियो)
‘नमस्ते कोलाराडो सांगीतिक साँझ’मा सत्यकला गुन्जने
फिल्म ‘सरौतो’ पहिलो गीत ‘कुले दाइ’ सार्वजनिक